Blockchain Izindaba 12.06.2018 - Blockchain Izindaba
$20M-Etere zangena kuma kusukela kabi amisiwe Ethereum zokusebenza
Ngokusho Chinese nokuvikeleka internet ngokuqinile Qihoo 360 Netlab, kubaduni basintshontsha $20 million ngo-Etere kusuka kabi amisiwe Ethereum izimayini yokumba futhi zabama-third party. Ochwepheshe ngaleso eqinile usho ukuhlaselwa Cyber ​​ukukhomba okungaphephile Ethereum ISIZINDA ku-inthanethi.
Inkampane yezimayini Crypto ukuba lokuphekiwe London Stock Exchange
Inkampani entsha esikuvumela kwabantu bakithi cryptocurrencies ngokusebenzisa amafoni nama-computer usebenzisa isevisi ukuthenga umemezele amacebo uhlu ku London Stock Exchange, ngqa lokushintshisana.
Argo Blockchain uthe uthemba ukukhulisa £ kwezigidi ezingu-20 e-hlu ulindele ukuba zenani emhlabeni £ 40 million. Argo uthi kuzoba inkampani yokuqala mfihlo yezimayini ukuze ujoyine stock market yaseLondon.
Amasevisi emali umkhakha uchitha $ 1.7B ku blockchain
Amasevisi zezimali umkhakha uchitha $1.7 bhiliyoni Amaleja ngonyaka basakaza, ngokusho komcwaningi Greenwich Associates.
Lolu cwaningo lubonisa izabelomali esichithwa blockchain kukhuphuke 67% ngonyaka odlule, nomunye e 10 amabhange kanye nezinye amafemu nokubika imali okweqa $10 abayizigidi ezingu. Ngokufanayo, inani labasebenzi abasebenza blockchain imizamo kabili ngonyaka odlule.
Richard Johnson, iphini likamongameli we-Greenwich Associates Market Sakhiwo Technology wathi ezingaphezu kuka ezintathu kwezine amaphrojekthi okwamanje ngaphansi ukuthuthukiswa kulindeleke ukuba bukhoma ingakapheli iminyaka emibili.
CFTC kudinga mfihlo Ukuhwebelana ukwabelana idatha zokuhweba
I-US Lezimpahla Futures Ukuhweba Commission (CFTC) ucele ukuthi mfihlo lwemali Ukuhwebelana eziningana – Bitstamp, Coinbase, itBit futhi Kraken – idatha exchange Ukuhweba ukunquma ukuthi zokukhwabanisa obuthinta ngayo emakethe mfihlo.
Nakuba uphenyo le CFTC sika namanje ngendlela efanele usaqala, kubonisa ukuthi nabalawuli zinesithakazelo sína ngokubeka Ukuhwebelana mfihlo ngaphansi kweso layo. Ngokuqondene, the CFTC iphenya ukuthi emakethe kuthintwa zokuhweba ezifana ubuqili noma abahwebi engena ezinkulu intengo yokufakelwa inyuka.
amabhange Korean uhlela ukusebenzisa blockchain ukuqinisekisa i-ID yekhasimende
Iqembu yasebhange kazwelonke e-South Korea ihlele ukuthi unikezele ngezinsizakalo uhlelo yokuqinisekisa ID blockchain esisuselwe ngamabhange yasekhaya.
Uhlelo olusha, BankSign, ngeke anikele amabhange basekhaya inketho esikhundleni salesi simiso ekhona yokuqinisekisa ID ibilokhu endaweni amashumi eminyaka e-South Korea.
Isevisi entsha ye-ID blockchain, okuyinto izotholakala kokubili inthanethi kanye yasebhange mobile, kumaka omunye imizamo yokuqala amabhange commercial e-South Korea ukwenza izinhlelo blockchain kutholakala kubasebenzisi jikelele.
Kraken Daily Market Umbiko 11.06.2018
$212M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 11.06.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 13.06.2018
Julayi 19, 2018 ngesikhathi 5:14 PM
Agasti 2, 2018 ngesikhathi 8:16 AM